Igodo 3 iji wulite mmemme ịre ahịa nkata na -aga nke ọma | Martech Zone
Mkparịta ụka AI nwere ike mepee ụzọ maka ahụmịhe dijitalụ ka mma yana mmụba ndị ahịa. Mana ha nwekwara ike ị nweta ahụmịhe ndị ahịa gị. Nke a bụ otu esi enweta ya nke ọma.
Ndị na-azụ ahịa taa na-atụ anya ka azụmaahịa na-ewepụta ahụmịhe nke onye chọrọ na awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu, ụbọchị 365 nke afọ. Ndị ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịgbasa ụzọ ha ka ha wee nye ndị ahịa njikwa ha na-achọ ma gbanwee nnabata nke mmekọrịta dị elu ka ọ bụrụ ndị na-akwụ ndị ahịa ụgwọ.
Iji mezuo ọchịchọ a, ọtụtụ azụmaahịa atụgharịala ndị nnọchi anya nkata nwere ọgụgụ isi. Chatbots kwadebere n'ụzọ pụrụ iche iji duzie mkparịta ụka ahaziri iche yana n'otu ntabi anya, na -egbo mkpa ha ma na -aga n'ihu n'otu oge site na njem onye zụrụ ahịa. Chatbot ziri ezi nwere ike ikwe ka ndị ahịa gị jụọ ajụjụ ọ bụla n'asụsụ Bekee doro anya kama ịgagharị na ibe ngwaahịa, blọgụ blọọgụ na ọdịnaya enwere ike ibudata iji chọta azịza ha chọrọ. Usoro nkata ọkaibe nwere ike ịdọta data ndị ahịa dị adị na mkparịta ụka ahụ ka o wee nwee ike igbo mkpa ha ma kwalite njem ha.
Agbanyeghị, azịza nkata n'ime onwe ha abụghị panacea. Ọ bụ ezie na nkata nkata dị irè egosila na ọ na -abawanye ntụgharị ntanetị site na 20 - 30 pasent, mmemme nkata na -emezughị nke ọma nwere ike ime ihe ọjọọ karịa mgbe ụfọdụ. Mana mgbe ejiri nlezianya mee atụmatụ chatbot ma jiri amamihe mee ya, ọ na -eme ka ọ dịrị ndị azụmahịa mfe ịga n'ihu ngwa ngwa, rụọ ọrụ nke ọma, na n'ọkwa.
1. Bute ndị na -ege gị ntị ụzọ
Mgbe ị na -emebe onye inyeaka nkata AI gị, chee maka ahịa gị. Ị kwesịrị ịhazi onye nnọchi anya gị dabere na onye ị maara na ndị ahịa gị bụ, gụnyere nghọta gị gbasara ụdị mkparịta ụka ha. Ndị na -ege gị ntị na -amasị ọchị na amara? Ma ọ bụ ha na -ahọrọ ịbịaru nso na isi ihe? Ozugbo ị matara onye ị na -agwa okwu, ị ga -enwe ike ikpebi ụdị mmadụ na ụda olu gị.
Anyị amatalarị na ịhazi onwe onye bụ isi maka mkpakọrịta nkata…
Pasent 80 nke ndị na -azụ ahịa na -ekwu na ọ nwere ike zụta n'aka ụlọ ọrụ na -enye ahụmịhe ahaziri.
Nchịkọta 50 na -egosi ike nke ịhazi onwe onye
Enwere ọtụtụ ụzọ iji webata mmetụ onwe onye. Malite site n'ịkpọ ndị ahịa aha ma jụọ ha gbasara mmasị onwe ha iji nyere ha aka nweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị dị ka nke emere maka mkpa ha. Ka ị na-amatakwu banyere onye ahịa gị, ọ ga-adịrị gị mfe ịhazi nkwado nkata ha.
Amamịghe mmadụ (AI. Mana nhazi nkeonwe enweghị ike ịka mkpa; ọ bụrụ na onye ahịa na -achọ nkwado teknụzụ, onye enyemaka nkata gị nwere ọgụgụ isi ekwesịghị ịmanye ha site na ọdụ ahịa. Gbalịsie ike lebara ebumnuche ndị ahịa kwuru anya, ma nke ahụ ọ pụtara ịza ajụjụ ozugbo ma ọ bụ nye njikọ maka akụrụngwa enyemaka.
Omume ọzọ kachasị mkpa maka ịzụlite nkata bụ mkpụmkpụ. Nye nzaghachi dị ukwuu iji mee ka ndị ahịa na-aga n'ihu kama iji nhọrọ mechie ha, wee zaa ajụjụ n'ozuzu ya na nkọwa akaụntụ akọwapụtara mgbe ọ bụla enwere ike. N'ụzọ ahụ, onye nnọchi anya gị ga-etinye nhazi nkeonwe yana mkpa n'ime azịza dị nkenke nke na-ezute ma na-atụ anya mkpa ndị ahịa gị ozugbo.
2. Mepụta mkparịta ụka na -enye aka ma na -akpali mmasị nke na -agbanwegharị
Iji jide n'aka na onye na -akparịta ụka gị na -enyere aka dịka o kwere mee, ọ bara uru ịdepụta mkparịta ụka na -aga n'ihu. Cheedị ka mmekọrịta gị na ndị ahịa gị nwere ike isi gbasaa wee mee atụmatụ n'ọdịnihu maka nsonaazụ na-aga nke ọma, njedebe nwụrụ anwụ, na atụmatụ itinye aka ọzọ dabere na azịza ha nwere ike ị nweta.
Mgbe ahụ wulite ntọala ihe ọmụma nke onye inyeaka AI nwere ike ịbanye iji mezue nkata nkata ahụ nke ọma. Ihe ka ukwuu n'ihe ọmụma gị dabere nke ọma; ị nwere ike ịgụnye ozi ọkọlọtọ, ajụjụ a na -ajụkarị, njikọ aka, nkọwa ngwaahịa, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ikpo okwu chatbot gị nwere ike ijikwa ọdịnaya nke ọtụtụ ihe, ị nwekwara ike ịhazi akụ ndị ahụ anya na ntọala ihe ọmụma gị. Dịka ọmụmaatụ, GIF, vidiyo, akwụkwọ mmado, eserese, bọtịnụ, na ụdị ọdịnaya mgbasa ozi bara ụba nwere ike ịme mkparịta ụka nkata ma mee ka ha wụpụ na enyo.
Ọdịnaya mgbasa ozi bara ụba na -enyere aka ime ka ndị na -akparịta ụka nkata nwere ọgụgụ isi wee mepụta ahụmịhe echefu echefu maka ndị ahịa, mana cheta ebumnuche mkparịta ụka ahụ. Ibute ihe doro anya na ebumnuche onye ahịa gị (yana ike nke onye nnọchi anya gị) ga -ahụ afọ ojuju ma nyere ha aka iru ebe ha na -aga; GIF na akwụkwọ mmado kwesịrị ịbụ ihe achicha.
3. Zere Nsogbu Ndị Na -enyere Nkata Aka
Otu uru dị ukwuu nke ndị na -enyere aka nkata nwere ọgụgụ isi bụ na ha na -akawanye mma ka oge na -aga. Ndị ọrụ AI kwadoro AI ga-amụta site na ahụmịhe ma melite ka ha na-emeju ọtụtụ nkata. Site na nke ahụ kwuru, ọ bụchaghị ezigbo echiche ịtọghe chatbot na -azụghị ọzụzụ na ezigbo ndị ahịa. Mee ka ndị ọrụ gị nwalee onye nnọchi anya gị n'ime ụlọ tupu ịnye ya ohere maka ndị na -ege nnwale sara mbara wee hapụ ya ọha. Ị kwesịrị ịdị na-enyocha arụmọrụ mgbe niile ma na-anakọta nzaghachi iji jide n'aka na onye nnọchi anya gị na-emeziwanye ma na-amụta ihe, ọbụlagodi mgbe mmalite.
Iji nyochaa onye na -ahụ maka ọgụgụ isi gị nke ọma, kpebie metrik arụmọrụ ị ga -esochi site n'ụbọchị mbụ. Kpebie otu ị ga -esi tụọ ihe ịga nke ọma wee mata KPI dị ka mkparịta ụka zuru oke, ọnụego njikọ aka, oge, na nnyefe na ọnụego ọdịda. Nke ahụ ga -enyere gị aka ịmepụta ndị nche maka onye nnọchi anya gị ka ị gaa n'ihu na -emeziwanye ya na ebumnuche ya, na -aga n'ihu na -aga n'ihu n'izu oke nkata.
N'agbanyeghị etu onye nnọchi anya AI gị siri mee nke ọma, mgbe ụfọdụ ndị ahịa ga-achọ mgbago mgbaghoju anya na ụdị mmekọrịta ọzọ. Nwefe na ngụkọta aka ruo ebe ịre ahịa, onye nnọchi anya ndụ, ma ọ bụ ọbụna adreesị ozi-e raara onwe ya nye iji mepụta ntụgharị dị mfe na enweghị nsogbu wee zere nkụda mmụọ nke ndị ahịa ma ọ bụ tụpụ. Ọbụnadị mgbago mgbago kwesịrị inyere ndị ahịa aka imezu ebumnuche ha ekwupụtara wee mee ka ha gafere n'ime olulu mmiri.
Ụlọ ọrụ ọ bụla ị nọ na onye ọ bụla ndị ahịa gị bụ, ịzụlite nkata nwere ọgụgụ isi bụ ụzọ dị ike iji nyefee ahụmịhe omenala nke gbanwere.
Tags: aiai nnyemaakaAmamịghe echichebotbotcoBotco.aiikorionye nkataonye nkataahịa nkatanzụlite nkatankataụlọ nkwonkwo ahịa
CSS Tailwind: Ihe eji arụ ọrụ-CSS Framework na API maka ime ihe ngwa ngwa